MX-19.4: Waad dhammaatay! Waxayna noo keeneysaa warar xiiso leh oo waxtar leh | Laga soo bilaabo Linux
MX-19.4: Waad dhammaatay! Waxayna noo keenaysaa warar xiiso leh oo waxtar leh 01/04/21
Shalay, 01 April 2021, kan caanka ah GNU / Linux Distro wac «MX » taas oo wali ka socota hordhac inta u dhaxaysa Kuwa ugu cadcad DistroWatch, ayaa sii daayay nambarkii ugu dambeeyay ee lagu heli karo lambarka «19.4».
Sidaa darteed, iyo maadaama ay macquul tahay in laga fikiro, «MX-19.4» waa casriyeyntii afaraad ee taxanaheeda hadda, «MX-19». Iyo sida aan dib u arki doonno, ma keenayso oo keliya ciladaha iyo cusbooneysiinta ee barnaamijyada aasaasiga ah iyo aasaasiga ah ee kala duwan ee ka yimid noocoodii asalka ahaa «MX-19», laakiin warar kale oo xiiso leh oo waxtar leh.
Kahor intaadan si buuxda u galin nuxurka wararka nooca cusub «MX-19.4 », waxaan halkan kaaga tagi doonaa xoogaa xiriiriyeyaal ah qoraaladii hore oo ku saabsan «MX » loogu talagalay kuwa xiiseynaya waxoogaa yar oo ku saabsan Nicmada GNU / Linux Distro.
"MX waa una Distro GNU / Linux ayaa si iskaashi ah uga dhexeeyay bulshooyinka antiX iyo MX Linux. Waana qayb ka mid ah qoysaska Nidaamyada Hawlgalka ee loogu talagalay in lagu daro kombuyuutarro qurxoon oo hufan leh degganaansho iyo waxqabad adag. Qalabkeeda garaafka ah ayaa bixiya hab fudud oo lagu dhammaystiro hawlo kala duwan oo kala duwan, halka Live USB iyo aaladaha wax lagu sawiro ee dhaxalka ah ee laga helo antiX ay ku darayaan soo-qaadasho la yaab leh iyo awood dib-u-habeyn wanaagsan Intaa waxaa dheer, waxay leedahay taageero ballaaran oo laga heli karo fiidiyowyo, dukumiintiyo iyo gole aad u saaxiibtinimo leh.".
1 MX Linux: Nooca cusub ee 19.4 waxaa laga heli karaa Abriil 2021
1.1 Maxaa ku cusub MX nooca 19.4
1.2 Maxaad u isticmaashaa MX Linux?
MX Linux: Nooca cusub ee 19.4 waxaa laga heli karaa Abriil 2021
Maxaa ku cusub MX nooca 19.4
Waxaa ka mid ah riwaayadaha ay soosaarayaasheeda ku shaaciyeen qaab daabacaadda gudahood degel rasmi ah, sheeg waxyaabaha soo socda:
Fududeynta casriyaynta: iyada oo loo marayo konsol la fudud «Kordhinta Apt» ka qoraalkii hore ee «MX-19 ».
ISO cusub ayaa la heli karaa:
32 bit ISO oo leh XFCE iyo Fluxbox oo wata heerka Debian 4.19 kernel
64 bit ISO oo leh XFCE iyo Fluxbox oo wata heerka Debian 4.19 kernel
64 waxoogaa ISO ah oo leh XFCE iyo Fluxbox oo leh kernel ah AHS 5.10
64 waxoogaa ISO ah oo leh KDE Plasma oo leh kernel AHS 5.10 kernel
Barnaamijyada la cusbooneysiiyay:
SHAXDA 18.3.6 (20.3.4 daabacaadda AHS)
Kernel debian-kii ugu dambeeyay 4.19 (5.10 loogu talagalay daabacaadda AHS)
Ciyaaryahan Video ah: VLC 3.0.12
Maamulaha Muusiga: Clementine 1.3.1
Macmiilka emaylka: Thunderbird 68.12.0
Suite Qalabaynta xafiiska: LibreOffice 6.1.5 (oo lagu daray hagaajinta amniga)
Ugu dambeyntii, waxay ku daraan waxyaabaha soo socda:
"Noocyada caadiga ah ee 'MX-19.4' (32-bit iyo 64-bit) waxaa ka mid ah noocii ugu dambeeyay ee loo yaqaan 'debian 4.19 kernel'. AHS (Taageerada Qalabka Sare ee Horukacsan) iso waxay ka kooban tahay nambarka 5.10.24 debian, cusbooneysiinta miiska 20.3, iyo sidoo kale xirmooyinka qalabka cusub ee cusub. KDE iso sidoo kale waa la cusbooneysiiyay oo AHS-ku saleysan sidoo kale wuxuu leeyahay 5.10.24 kernel iyo mesa la cusbooneysiiyay iyo baakado adag. Sidii caadiga ahaydba, sii-dayntan waxaa ka mid ah casriyayntii ugu dambaysay ee debian 10.6 (buster) iyo bakhaarrada MX". MX-19.4 ayaa hadda soo baxay!
Maxaad u isticmaashaa MX Linux?
Shakhsiyan, hadda waxaan isticmaalaa «MX-19 » oo waxaan u isticmaalaa tan iyo markii nooca la heli karo «MX-17.1 ». Xaqiiqdiina qaar badan ayaa had iyo jeer la yaaban oo i weydiiya: Maxay tahay sababta loo isticmaalo Distro sida "MX" ah? in aysan ahayn tan ugu fudud ee laga heli karo kuwa badan oo ka yar kan ugu quruxda badan, taas oo markaa jirta, ku noolaanaysa magaca koodhka hadda jira ee «Duckling fool xun ". Iyo sidoo kale: Maxaa ka dhigaya mid qaas ah in aad joogtid dusha sare ee DistroWatch muddo dheer?
Marka kuwani waa mis 6 dood ama xoog maxaan ku arkaa «MX-19.X » inaad doorbido:
Isticmaal hooseeya oo la aqbali karo oo loogu talagalay ilaha 64 Bit.
Nooc diyaar ah oo loogu talagalay 32 Bits, oo waxtar badan u leh qalab duug ah ama qalab yar.
Xirmo aad u fiican, taas oo ah, qalabka softiweerka hooyo ee ay soo saartay MX.
Waxay ku saleysan tahay Debian GNU / Linux 10, oo siisa aasaas deggan oo casri ah, oo leh taageero aad u fiican.
Waxay aqbashaa rakibaadda iyo adeegsiga deegaanno Desktop dheeraad ah si aad u wanaagsan, taas oo ah, marka laga reebo XFCE, Plasma iyo FluxBox, waxay si fiican ula shaqeysaa LXQT, OpenBox, I3wm iyo IceWM, ugu yaraan illaa iyo inta aan imid si aan u tijaabiyo.
Waxay kuu ogolaaneysaa inaad sameysid Respin (Sawir qaade live ah, la beddeli karo oo la rakibi karo), kaas oo, marka loo isticmaalo aaladda keydka USB, uu leeyahay awood adkeysi fiican.
Nota: Tan dambe waxay siineysaa faa iidada ah, mar hadii aan saacado ama maalmo kusoo qaadanay hagaajin, habeyn, qabatinkeena «MX-19.X » waxaan sameyn karnaa a Dib u dhig isku mid ah, sidaa darteed haddii ay dhacdo khalad dilaa ah ama aad rabto inaad sameyso wax fudud dib u rakibid ama dib u dajiso of our Nidaamka hawlgalkaAynu ku qaadanno daqiiqado yar (dib) oo aan ku rakibeyno wax walbana aan u leenahay sidii aan dooneyno, annaga oo na badbaadinayna saacado badan / fooladeyn ku soo noqnoqoshada wax kasta oo aan ka soo qaadnay. Haddayna ku isticmaalno qolka keydka USB-ga ama adkaysi la'aan, waxaan ku bilaabi karnaa innaga kombiyuutar kasta «MX-19.X ». Sidii aan ku sameeyo tayda Dib u dhig loo yaqaan Mucjisooyinka.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «MX-19.4», taasi waa, ka nooca ugu dambeeyay laga heli karo 01 April 2021 oo ka mid ah GNU / Linux MX Distro taasi wali way ka socotaa hordhac inta u dhaxaysa Kuwa ugu cadcad DistroWatch; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » MX-19.4: Waad dhammaatay! Waxayna noo keeneysaa warar xiiso leh oo waxtar leh
nin qurux badan dijo
Waan ka tagay maxaa yeelay waxay si joogto ah u garaacday taleefanka
umana ay ahayn awood la’aan
Sidoo kale waxaa jiray barnaamijyo aan shaqeyn, waad u rakibi doontaa sida aad u rakibayso, Butt tusaale ahaan
Ku jawaab malevoelguapo
Waad salaaman tihiin, Malevoelguapo. Waad ku mahadsantahay faalladaada. In kasta oo, aysan ahayn wax aan caadi ahayn in barnaamijyada qaarkood aan lagu rakibin meelaha qaarkood, haddii ay tahay wax aad looga xumaado inaysan ku siin aragti wanaagsan oo ku saabsan Qalabkaaga wanaagsan. Aniga ahaan, MX Linux waa wax aad ufiican, labadaba qaabkeeda asalka ah iyo shaqsigeyga shaqsiyeed.